Neqhiya Machine, Folder neqhiya, ndiyibeke eqhiyeni Ukusonga Machine - Comming
Dongguan Comming Machinery Inkampani lityale yi Bmax amazwe Dongguan mzi, apho kokwabo maturest ndawo-perile riverdelta of China, kwakunye ivaliwe ku Songshan Lake (indawo Ecology), nto leyo belongshigh &-technology entsha indawo kwinqanaba likarhulumente kunye nenkqubo chain ngokugqibeleleyo yorhwebo njengoko kanye umoya namandla ka ezintsha; ngexesha intsingiselo, mveliso yethu nayo basekuhlaleni epasejini segolide phakathi Guangzhou kunye Shenzhen, iiyure nje 1 ngololiwe ukusuka Hongkong kunye nesiqingatha seyure f Rom Guangzhou eyafika yethu ngqo; thina Injongo kwi zomzimba ukuguqula umatshini provideefficiently kunye ne- peripherial umatshini ivale oluzenzekelayo.
Thina ukugcina ulawulo humanized njengoko umgaqo abantu basoloko ukususela lusekiwe, siya bayaqhubeka ukuba impumelelo yethu expe rienced ezintsha kunye nangendlela kanzulu, sisoloko sithembele q uality enokuthenjwa + nokusebenza Humanized + Maintaince nje njengoko imigaqo yethu ukuyila, weare ndade ekuvunyweni isiqinisekiso evela kubaxhasi ukusuka zonke ihlabathi North amercian, South amercian, Middleeast, eAsia yaye kungekudala, siye igunya lethu namazwe angaphandle yakhe ababhalisiweyo kurhulumente chinese kunye Impumelelo sed zavunywa kwinkqubo yolawulo lomgangatho ISO9001: 2008
Siya ezizodwa kumashini inyama ezahlukeneyo uguqula kwakunye kuthelekiseka peripherial umatshini packi ng ezifana roll yangasese olungabuyeli mva umatshini, mini jethi umatshini conwinding, ikhitshi itawuli conw inding kunye nobugcisa lamination, ndiyibeke eqhiyeni uthotho (kubandakanywa ushicilelo lamination), iphepha itawuli elisongiweyo (Lamination) kwaye nangokunjalo ! siya kuqinisekisa ukuba sinako ukoyisa eli nge All-macala & isono sethu cerely Cooperation.
CJ-S100A Pocket Tissue Ukusonga Machine
BZ-ZW450 Automatic Ubushushu Shwabanisa Packaging Machine
BZ-R200 Automatic sobuso Ukupakisha Machine
BZ-J200 oluzenzekelayo ngamnye machine urhangqo nokupaka
Idilesi: zone 3th mveliso, kwilali xiasha, idolophu shipai, Dongguan mzi, Guangdong kwiphondo, prc
Phone: + 86-76989276222 (imigca 30)
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo, bonke iqela lethu iya kufumaneka nawe kwiiyure ezingama-24